Sora-by metaly mora metaly manapaka laser orinasa sy mpamatsy | Ouzhan
Mampiasà taratra laser haingam-pahefana hamaivanina ny fitaovana hohetezana, mba hafanaina haingana amin'ny hafanan'ny etona ny fitaovana, ary etona hamorona lavaka. Rehefa mihetsiketsika ny fitaovana, dia mamorona loaka tsy tapaka ireo lavaka, miaraka amin'ny sakany tena tery (toy ny 0,1 mm). Farano ny fanapahana ny fitaovana.
Fametahana laser laser metaly fanodinam-bola vita amin'ny metaly
Ouzhan dia manome anao ny karazana rindrambaiko fanapahana laser metaly: aerospace, fanamboarana sambo, milina fambolena, milina mazava ho azy, fitaovana fiarovana ny tontolo iainana, fitaovana fitsaboana, fitaovana fanatanjahan-tena, fanaka sy kojakojan-tokatrano, kojakojan-dakozia, fitaovana elektronika, jiro sy lanterne, efijery, metaly asa tanana, aluminium Smallpox, rindrina ambainy aluminium, kabinetra elektrika, indostrian'ny fiara, indostrian'ny dokam-barotra, fanodinana vy ary orinasa hafa. Ny milina fanapahana laser dia afaka manodina: vy karbaona, vy tsy misy fangarony, vy silika, vy lohataona, vy firaka, firaka manganese, firaka titanium, aliminioma, firaka aliminioma, takelaka aluminium, lovia vita amin'ny vy, lovia electrolytic, lovia pickling, varahina ary fitaovana hafa.
Tombony amin'ny faritra fanapahana laser vy Ouzhan
- Fanodinana tsy misy fifandraisana
- Fanovana kely ny lava tery
- Loko madio tanteraka
- hakitroky angovo avo be
- Madio, azo antoka ary tsy misy loto
Ouzhan OEM namboarina laser vy metaly manapaka service-China Shanghai taratasy metaly fanapahana laser fanapahana faritra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fepetra takian'ny mpanjifa dia azo zahana ny fanodinana laser vita amin'ny metaly avo lenta miaraka amin'ny kalitao azo antoka sy azo antoka. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana sy fiasan-tsika mahomby dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny metaly fanapahana laser metaly. Ho fanampin'izany, ny vokatra fanapahana laser metaly dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana amin'ny fanapahana laser laser izahay ary ny vokatra fanapahana laser ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Tombony amin'ny fanapahana laser laser
⑴ Mampiasà rafitra fanapahana laser misy refy telo na fametrahana robot ho an'ny indostria hanapahana fiolahana habakabaka, mamolavola rindrambaiko fanapahana telo-refy isan-karazany hanafainganana ny fizarana manomboka amin'ny fakana sary ka hatramin'ny fanapahana faritra.
⑵ Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana, hikarokaroka sy hamoronana rafi-fanapahana manokana isan-karazany, rafi-pitaterana fitaovana, rafitra maotera maotera sns, ary ny hafainganan'ny fanapahana ny rafitra fanapahana dia nihoatra ny 100m / min.
⑶ Mba hanitarana ny fampiharana ny milina fanaovana injeniera, ny indostrian'ny fanamboaran-tsambo, sns., Ny hatevin'ny vy ambany karbaona dia nihoatra ny 30mm, ary nandinika manokana ny fikarohana momba ny teknolojia fanodinana vy vy karbaona ambany amin'ny azota hanatsarana ny kalitaon'ny fanapahana takelaka matevina. Noho izany, ny fanitarana ny sehatry ny fampiharana indostrialy ny fanapahana laser laser any Shina ary ny famahana olana ara-teknika amin'ny fampiharana vaovao dia lohahevitra manandanja ho an'ireo injeniera sy teknisiana.
Inona avy ireo fampiharana ny fanapahana laser metaly
–Fanapahana metaly: ny fanapahana laser dia afaka manadio madio kokoa sy malama ary mafy kokoa noho ny fanodinana mekanika. Toy ny milina, azo alamina programa koa izy ary hotarihin'ny solosaina, izay midika fa ny milina fanapahana laser dia afaka manamboatra ampahany vy maro ho an'ny indostria toy ny fiara sy solosaina.
–Fy metaly: ny hazavana taratra tsy hanimba ny tariby optika. Ny metaly toy ny alimo, volafotsy, varahina ary volamena dia hita taratra avokoa ary tena ilaina amin'ny famokarana fiara sy semikonductor.
–Siansa ara-pitsaboana: ny fanapahana laser dia mitana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny sehatry ny fitsaboana. Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana dia ilaina ny fandeferana avo lenta sy henjana be. Noho ny filan'ny indostrian'ny fitsaboana amin'ny famokarana avo lenta, ity haitao ity dia mahafeno ny filan'izy ireo satria afaka mamerina ny endriny, na ny marina na ny haingana.
Karazan-fitaovana fitsaboana maro no manana ny niandohany tamin'ny fanapahana laser, nanomboka tamin'ny fitaovana kardia sy orthopedika ka hatramin'ny fantsom-panafody. Miaraka amin'ny fanapahana laser, ireo fitaovana ireo dia azo amboarina amin'ny hafainganam-pandeha haingana kokoa nefa tsy mahafoy tena ho marina.
Tombony amin'ny serivisy fanapahana laser vy Ouzhan
- Ny fanapahana laser laser vita amin'ny metaly rehetra dia iharan'ny fanaraha-maso kalitao hentitra.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny famokarana laser vy mazava.
Previous: OEM lamba vy miondrika faritra
Manaraka: Faritra fanapahana laser tamin'ny metaly